Dhagayso: Imaamada la kashifay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhagayso: Imaamada la kashifay
La daabacay fredag 18 maj 2012 kl 12.18
Habeenkii arbacada ayaa tv-ga dalkan sweden qaybtiisa dabagalka iyo fashilaada laga soo daayey warbixin fashilinaysa kala hadalka maamulada toban masjid oo ka mida masaajidada muslimiinta ee ku yaal dalkan sweden, imaamadaas ayaa waxa ka mid ahaa Huseen Farax oo ka tirsan masjidka somalida ee xaafada Rinkeby ee ku yaal caasimada dalkan sweden ee stockholm.
Barnaamijkan laga soo daayo maalmaha arbacooyinka Tv-ga qaranka dalakan Sweden ayaa sidiisaba iska ah mid xasaasiya oo badana lagu ka shifo siraha dawlada, masuuliyiinta iyo cidkasta oo masuul ahba.
Wariyaha barnaamijkan uppdrag granskning ayaa diray laba gabdhood oo asal ahaan ka soo jeeda wadamada muslinka isla markaasna aqoon u leh dhaqanka islaamka, kuwaaso waydiinayey suaalo isku mida dhamaan imaamada ka hawl gala masaajidada dalkan sweden, toban ka mida, kuwaaso qaar kamidi ay ku haleen waxyaabo argagax iyo xanaaq ku riday dadka ku nool dalkan sweden, waxaana kamid ahaa masuuliyiintaas imaam ka hawl gala masjidka ugu weyn ee ku yaal dalkan sweden oo sheegay in aan gabadha ninkeedu dilaa aanay bileyska ka dacweeyn.
Masjidka u imaamkani ka hawl galo ayaa waxa hoos yimaada masjidka somalida ee ku yaal rinkeby oo u gudoomiye ka yahay Ibrahin Buraale.
Ibraahim ayaan kula kulmay xarunta masjidka ee ku yaal xaafada rinkeby, weydiiyayna sidu u arko in masjidka weyn ee ay hoos tagaan iyo hadalka ka soo yeedhay imaamka masjidkaas.
- Waa arin in badan la doonayey in dadka loo cadeeyo in waxaan sheegno iyo waxaanu samaynaa aanu is lahayn, ayuu sheegay Gudoomiye Ibrahim.
Balse maaha imaamka masjidkan u ka hadlayo Ibraahim Buraale ee waxa si qarsoodiya looga duubay imaamka magaalada örebro oo sheegay in arimo khilaafsan sharciga iyo qawaaninta u yaal dalkan Sweden
Kala badh maasjidan daba galka lagu sameeyay ayaa lacag ay dawladu sannad kasta ugu deeqda, kuwa kalana degmooyinka ayaa lacag ugu gargaara, hadaba arinkan ayaa waxa aad uga xumaaday wasiirka is dhexgalka Erik ullenhag.
-Si ay masaajidadani u helaan lacagta dawlada, waa in ay masaajidadani u taagnaadaan dimiquraadiyada iyo sinaanta, taaso macnaheedu yahay in masaajidadan iyo muslimiinta ka tirsaniba ay tahay shaqo u taala in ay waajibkeeda ka soo baxaan, raaciyeyna in ay wacantay ficilka ay ku kaceen maasaajidka weyn ee Stockholm:
-Waa wax wanaagsan arinka ay sameeyeen masjidka stockholm oo ah in ay ka xidheen shaqadii imaamkii sheegay in ninku haysan karo afar xaas iyo in naagta la dilay aanay bileyska ninkeeda ka dacweeyn. wasiirka ayaa sheegay in ay tahay mid bulshada u diraysa fariin culus oo ah in aanay sax ahayn ficilka imaamkaasi ku kacay.
Imaamkan ka hawl gala masjidka stockholm ayaa u sheegay labadan gabdhood ee gargaarka waydiistay in ninkeedu la guursan karo xaas kale, hadii u dilana aanay bileyska ka dacweyn oo ay dhibka ku samirto.
Arinkan ayaa dhamaan ka yaabiyey bulshada reer sweden.
Dhanka bulshada ayaa waxa studiha idaacada nagu soo booqday somali siyaasi ah oo magaciisa la yidha, Abdiqani Mohamed oo ah gudoomiyaha xisbiga sooshiiyaal dimuquraadiga laantiisa soomaalida ee caasimada Stockholm, kaaso sheegay in iimaamadani yihiin qaar laga masruufo wadamo kale oo ujeedo gaar ah leh.
- Waxaan ka war qabnaa in misaajidada dalka gudihiisa ku yaal qaar ka mida laga masruufo wadamada dibada, dhalinyaro badan ayaa masaajida laga kaxaystaa, inaka ka cararnay masuuliyada oo la ogaadaa waxa u imaamku dadka barayo, waayo ilmahu wuxu ku dhacaya in la baro wax aan la ogayn, ayuu sheegay Abdiqani.
Hadaba arintani intee in leeg oo dhib ah ayey ku keeni kartaa muslimiinta degen dalkan sweden, hussen faarax iyo markale.
- Walaahi waxan odhan kara kolba sidii loo dhigo in ay ku xidhantay, waxaad tusaale ahaan arkaysaa shabakadaha internetka iyo bogaga wax lagu qoro, waxaad ku arkaysaa wax dadka muslimiinta looga soo horjeedo, markaas waxa la dhihi karaa in taas looga faaiidaysan karo, ayuu sheegay Hussein Farah oo ah Imaamka gabdhaha kamarada qarsoon wax uga duubayey in ay bileyska ka dacweeyaan nnka gacanta saaray.
Imaammada oo tooshka lagu ifiyey